हामी माउरीससबाट धेरै लाभ लिन सक्छौ ः कार्की « KhelkudNews.com
Published On :3September, 2021 1:42 pm
गणेश कार्की, नेपाल राष्ट्रिय गोजुरियो कराँते सङ्घका अध्यक्ष, ऊर्जा व्यवसायीको सङ्गठन इप्यानका उपाध्यक्ष, सिङटी हाइड्रोपावरका प्रमुख तथा नेपालका लागि माउरीससका अवैतनिक वाणिज्य दूत । पछिल्लो समय नेपालको खेल अवस्था, कोभिड महामारीसँगै खेल क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
सिङटी हाइड्रोपावरले नेपालमा ऊर्जा सङ्कटलाई कत्तिको सहयोग गरेको छ ?
हामी केही समय अघि सम्म मेन प्रसारण लाइनमा जोडिएका छौ । नेपालमा विद्युतको अझ धेरै उत्पादनको खाँचो छ । हामीले दिने पर्ने जत्ति इनर्जी दिएका छै । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् प्रमुख हो र सिङटी हामी यसको एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी छौ ।
सेयर बजारमा सिङटीको मूल्य जसरी बढेको छ, तपाईँहरू माथि यत्ति धेरै विश्वास गर्नुका कारण के होला ?
पहिलो कुरा त जुन समय आइपिओ खुलेको थियो, त्यो समयमा मेन प्रसारण लाइनसँग हामी जोडिएका थिएनौ । अहिले हामी जोडिएका छौ । यसका अन्य प्राविधिक कुरा हरू पनि हुन सक्छन् , जसका बारे हामीलाई भन्दा धेरै सेयर विज्ञहरूलाई थाहा हुन सक्छ । तर, बजारले हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको भने साँचो हो । यो हाम्रो सफलता पनि हो ।
खेलकुदको कुरा गरौँ । महामारी पछि नेपाली खेलकुद कसरी अगाडी बढ्छ ? के साँच्चै ठप्प नै हो ?
यसरी लामो समय ठप्प राख्नु हुँदैन । कोभिडको पिकको समयमा हामी लकडाउनमा बस्यौ । अब सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर खेलकुद गतिविधि जारी राख्नु पर्छ । यो महामारीमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा कमजोर मान्छेलाई त तत्काल नै असर गर्ने देखियो । जीवन भन्दा ठुलो खेल त होइन । तर, जीवन रक्षा गर्दै खेलकुदलाई पनि अघि बढाउने योजना बनाउनै पर्छ । यस कारण पुरानो अवस्था त भन्न मिल्दैन । तर पूर्ण रूपमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर प्रशिक्षणलाई त तीव्रता दिन पर्छ ।
राष्ट्रिय गोजुरियो कराँते सङ्घको त झन् कुनै गतिविधि नै देखिएको छैन नि
कोभिडको कारण हाम्रो खेल पनि प्रभावित भएको छ । हाम्रा गतिविधि रोकिए । बिस्तारै हामी फेरी गतिविधि सुरु गर्दै छौ । काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर प्रशिक्षण सुरु भएको छ ।
नेपाली कराँतेमा धेरै सङ्घ छन् , यसमा राष्ट्रिय गोजुरियोका अवस्था कहाँ हो ?
अहिले अवस्था कहाँ भन्दा पनि हाम्रो प्रयास तर्फ लागौँ । सितेरियोका १०० भन्दा बढी रोजगार युक्त प्रशिक्षक हुनु हुन्छ । अन्यको त्यो अवस्था छैन । यस कारण पनि सितेरियोसंग हामी लगायत अन्य कुनै कराँते सङ्घको प्रतिस्पर्धा हुन कठिन छ । यस बाहेकको हकमा जनशक्तिको आधारमा, काम गर्ने टिमको आधारमा र खेलाडी सङ्ख्याको आधारमा हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ । यसलाई मूर्त रूप दिन र माथिल्लो उचाइमा लैजानका लागि हामी प्रयासरत छौ । गठन भएर आफूलाई आम खेलाडीको बिचमा लैजाने समयमै महामारीको सङ्कट पनि देखियो ।
तर मलाई विश्वास छ , बिस्तारै हामी प्रभावकारी शक्तिको रूपमा स्थापित हुने छो ।
प्रसङ्ग बदलौँ , नेपाल र माउरिससको सम्बन्ध तथा नेपालले पाउन सक्ने लाभ बारे बत्ताइदिनु न ।
थुप्रै लाभ लिन सक्ने स्थान छ । पहिलो त व्यापारिक सम्झौता हुन सक्छन् । त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण श्रम सम्झौता हुन सक्छन् । हामी त्यहाँ जाने र त्यहाँबाट यहाँ आउने र एक आपसको बिचमा प्रविधि र सिपको आदान प्रदान हुन सक्छ । माउरिससको श्रम बजारमा नेपालीको माग राम्रो हुन सक्छ र नेपालीको जीवन स्तर उकास्न सहयोग पुग्न सक्छ । यसबारेमा सायद निकट भविष्यमा सम्झौता हुने छ ।
व्यापारिक रूपमा अन्य फाइदाहरू पनि हुन सक्छन् होलान् नि ?
फाइदा हुन सक्छ । यसका लागि हाम्रो समय प्रतिकुल बन्न पुग्यो । गत वर्ष यसै आसपास म नियुक्त भएको हुँ । २०२१ को फेब्रुअरी मार्च तीर सबै अवस्था सहज भए झैँ थियो । केही कामको सुरुवात पनि भएको थियो । पेपर वर्कको सुरुवात हुँदा नहुँदै कोरोनाको दोस्रो लहरले हामीलाई सतायो । तर, अब बिस्तारै यो ठिक हुने छ र व्यापारिक रूपमा पनि फाइदा हुने गरी दुई देशका बिचमा सम्झौता हुने छ ।
आइएमई पे र मिस युनिभर्स नेपाल २०२१ को प्रतियोगिताका लागि साझेदारी घोषणा
आइएमई पे मिस र युनिभर्स नेपाल २०२१ को प्रतियोगिताका लागि साझेदारी घोषणा गरिएको छ ।